माओवादीलाई झट्का दिंदै गठबन्धनबाट आफै बाहिरियो कांग्रेस, पत्रकार सम्मेलन गरेर के भन्यो ? — Sanchar Kendra
माओवादीलाई झट्का दिंदै गठबन्धनबाट आफै बाहिरियो कांग्रेस, पत्रकार सम्मेलन गरेर के भन्यो ?
गोरखा । सत्ता गठबन्धनमा तालमेल हुन नसकेपछि नेपाली काँग्रेस बाहिरिएको छ। गठबन्धनमा सहभागी चार दलमा चुनावी तालमेलका विषयमा सहमति हुन नसकेपछि गोरखामा काँग्रेस मित्रवत रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरेर बाहिरिएको हो ।
यस्तै कलैया उपमहानगरको मेयर काँग्रेस र उपमेयर जसपाको भागमा परेको छ । दुवैले उम्मेदवार टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन् । एमालेले मेयरमा विनोद साहलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरे पनि उपमेयरको उम्मेदवार टुङ्गो लगाएको छैन । यसअघि निर्वाचनमा कलैयाको मेयर र उपमेयर काँग्रेसले जितेको थियो ।
यस्तै जनकपुर उपमहानगरमा सत्तारुढ गठबन्धनभित्र मेयर जसपाको भागमा परेको छ भने उपमेयर काँग्रेसको भागमा परेको छ । दुवैले उम्मेदवार भने टुङ्गो लगाएका छैनन् । एमालेले पनि यहाँ मेयर र उपमेयर दुवै टुङ्गो लगाएको छैन ।
यस्तै प्रदेश १ अन्तर्गत इटहरी उपमहानगरको मेयरमा सत्ता गठबन्धनबाट काँग्रेस र उपमेयरमा एकीकृत समाजवादीले उम्मेदवारी दिने टुङ्गो लागेको छ । तर दुवै दलले उम्मेदवार भने चयन गरिसकेका छैनन् । एमालेले इटहरीको मेयरमा यमकुमार सुब्बा र उपमेयरमा संगीता चौधरीलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ ।
सत्ता गठबन्धनबाट धरान उपमहानगरको मेयरमा काँग्रेस र उपमेयरमा माओवादी केन्द्रले उम्मेदवारी दिनेछ । दुवै दलले उम्मेदवार भने चयन गर्न बाँकी छ । एमालेले धरानको मेयरमा मञ्जु काफ्ले र उपमेयरमा पदम लिम्बुलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ ।